Nkọwapụta na nkọwapụta ọdịdị ọdịdị: asụsụ anyị na-anwụ n'ihi mmegide ọdịbendị, mgbe ajụjụ gbasara okpukpe gasịrị, nsogbu nke abụọ anyị, opekata mpe otu n'ime ihe kachasị mkpa, bụ ịchekwa akwụkwọ ọkọwa okwu nke asụsụ anyị "Nke a metụtara ihe niile Asụsụ Africa (edere ma ọ bụ edeghị ya) ”
Site na: KongoLisolona: November 17, 2020 03: 01 Enweghị asịsa
Mgbe ị na-asụ asụsụ ndị ọzọ, ọ na - ebute ọgba aghara n’obodo. Nke a bụ ihe mere o ji dị anyị mkpa ịkọwapụta ụfọdụ echiche, na French dị mfe, maka o ...	GỤKWUO
Ọ dịghị ihe ọhụụ n'okpuru anyanwụ: nye ndị na-agụ Akwụkwọ Nsọ, amamihe Sọlọmọn na-agwa anyị "Na ọ dịghị ihe ọhụụ n'okpuru anyanwụ" Ihe dịlarị, na nke ga-adị
Site na: KongoLisolona: November 17, 2020 00: 00 Enweghị asịsa
Mgbe ị na-eme ihe ma ọ bụ ihe na-egosi na ọ bụ ihe “ọhụụ”, mara na emeelarị ya n’ebe ọzọ, na a ga-eme ya ọzọ. Na foto a, ọ bụrụ na anyị asị nwanyị ahụ (Madonna), q ...	GỤKWUO
Bill Gates na Cantù Na-ahụ Maka Ọrịa Cancer maka Humanmụ mmadụ: ọnụ ọgụgụ mmadụ dum, na nke kachasị ndị isi ojii / ndị Africa, amaghị ihe na-eme; ọ maghịdị ihe na-eme ya; i chere na opi bụ onye iro gị nke mbụ? “Chee echiche ọzọ” VIDEO (Na)
Site na: KongoLisolona: November 16, 2020 14: 44 Enweghị asịsa
Ọ bụ eziokwu na ụda nwere ike ọ gaghị eche banyere gị (ndị ojii / ndị Africa) n'otu n'otu, mana ọ ka na-eme ihe dị mma maka mmadụ site na ịgbasa ...	GỤKWUO
Site na: KongoLisolona: November 16, 2020 12: 12 Enweghị asịsa
Worldwa ga-akwadebe na Jenụwarị 2021 maka ọrụ ịgba ọgwụ mgbochi megide nje Corona a. Ndị rụpụtara ọgwụ mgbochi ndị a na atụmatụ ha "Big Pharma" ...	GỤKWUO
Site na: KongoLisolona: November 16, 2020 10: 10 Enweghị asịsa
Dr. Stella Immanuella: Dibịa akwụkwọ; Onye dibia nke ndi nduzi nke ndi ogwu; Ọ na-anọdụ ala na Board of Directors of the Order of Physicians; O nwere otutu ...	GỤKWUO
Chineke nke Israel weghachite nkpuru-obi ọzọ n'ọmuma-ulo-ikw of nke ndi n hisso uzọ-ya: ayi gāhu hu kwa ihe nile bayere amuma nile nke ndi n followersso uzọ Chineke nke Israel; n'oge ntuli aka ntuli aka America gara aga, Chineke nke Israel gosipụtara na ọ bụ Chineke nke mgbagwoju anya… (Na)
Site na: KongoLisolona: November 16, 2020 08: 08 Enweghị asịsa
Ka ntuli aka onye isi ala nke United States na-eru nso, amụma sitere n'ike mmụọ nsọ sitere n'aka Chineke nke Israel na-aga n'ụzọ niile. Maka ụfọdụ, Chineke nke Israel kpughere ha ...	GỤKWUO
Universalism bu echiche efu: nchegbu mbu nke ndi mmadu ma obu ndi mmadu nke omenala nomadic gbadoro anya na iri ihe na inu ihe onunu, ya bu, n’aju ajuju banyere onodu ego.
Site na: KongoLisolona: November 16, 2020 06: 06 Enweghị asịsa
E wuru ụwa Eurasia n'ụkpụrụ a, nke ịlanarị site na ịchụ na akụnụba. Omenala a na-egosi trauma n'ihi mmetụta ...	GỤKWUO
Nọvemba 26 08: 43